भाग्यलाई दोष दिनु अघि एकपटक जरुर हेर्नुहोस ऐना ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»भाग्यलाई दोष दिनु अघि एकपटक जरुर हेर्नुहोस ऐना !
भाग्यलाई दोष दिनु अघि एकपटक जरुर हेर्नुहोस ऐना !
By रिता घिसिंग on २८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०७:५२ धर्म/दर्शन
पिएनपिखबर : भनिन्छ ऐना कहिले पनि झुट बोल्दैन। त्यस्तै वास्तुको नियम पनि कहिले गलत साबित हुन् सक्दैन। त्यसैले घर भित्र भएको ऐना पनि सहि दिशामा राख्नु पर्छ। ऐना गलत दिशामा राख्दा घरमा नकारात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ। यसले घरमा शारीरिक-मानसिक कष्टका साथ साथै घरमा कलह र दुश्मनको भय हुन्छ।
आउनुहोस् गलत दिशामा ऐना लगाउदा के हुन्छ जान्नुहोस
उत्तर-पश्चिम दिशामा ऐना राख्नाले घरमा दुश्मनी उत्पन्न हुन्छ, घरको युवा, महिला सदस्य दुखी हुन्छन। दक्षिण-पश्चिम दिशामा ऐना लगाउनाले घरको मुखिया घरबाट बाहिर रहनुपर्छ। अनावश्यक तथा आकस्मिक खर्चको सामना गर्नुपर्छ। दक्षिण-पूर्वमा ऐना राख्दा वैचारिक मतभेद, तर्क-वितर्क उत्पन्न हुन्छ। पूर्व दिशाको भित्तामा ऐना राख्दा बिमारी हुन्छ।
ऐना कहिले पनि सुत्ने खाटको सामुने राख्नु हुदैन किनकी रातमा सुत्ने समयमा ऐनामा पलंग देखेमा बैबाहिक जीवनको लागि एकदम घातक साबित हुन्छ। ति पलगमा सुत्ने मानिसहरुको बीच सम्बन्ध बिग्रिन्छ।
यदि सुत्ने समयमा तपाइको शरीरको कुनै अंग ऐनामा देखिएमा त्यस अंग सम्बन्धि समस्या झेल्नु पर्छ। छाती देखेमा छाती दुख्ने, खुट्टा देखे खुट्टा दुख्ने यस्तै समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ।
घरको मुख्यद्वारको सामुने ठुलो एना राख्नु हुदैन। किनकी घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यसले नकारात्मक उर्जामा परिणत गरिदिन्छ। यसले घरमा कलह उत्पन्न गर्छ ।
घरमा ऐना यसरी राख्नुहोस्
१,ऐना गलत दिशामा छ भने हटाउनु राम्रो हुन्छ। तर हटाउन सकिदैन भने घरको चारै दिशामा एक ऊर्जायुक्त पिरामिड राखेर नकारात्मक उर्जा हटाउन सकिन्छ।
२, यदि तपाइको घरमा रहेको ऐनामा पलंग र शरीर देखिन्छ भने सुत्नु अघि कुनै बाक्लो कपडाले ढक्दिनुहोस्। यसो गर्दा मानसिक र शारीरिक कष्टबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
३, यदि ऐना सही दिशामा लगाउनु भएको छ भने ऐनाको दुइ तिर नै एक-एक बिरुवा लगाउदा सकारात्मक उर्जा उत्पन्न भई घरमा सुख समृद्धि एबं शान्ति उत्पन्न हुन्छ।
४, भनिन्छ, ऐना टुट्यो त भाग्य पनि फुट्यो। त्यसैले टुटेको ऐना तुरुन्त हटाउनुहोस् र नया ऐना राख्नुहोस्। फोहोर र दुषित ऐनाले जीवन नै दुषित बन्न सक्छ त्यसैले घरमा रहेको ऐना सफा राख्नुहोस।